ऋतिक रोशनसँग विवाह गर्दै नायिका सोनाक्षी ! « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : ३ आश्विन २०७६, शुक्रबार १९:०२
त्यसपछि फिल्म क्षेत्रकै मान्छे विवाहका लागि रोज्दा कसलाई रोज्नु हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले ऋतिकको नाम लिएकी हुन् । उनले आफूले कुनै गलत नियतले विवाह नगर्ने पनि स्पष्ट पारेकी छन् ।पछिल्लो समय बलिउडमा अभिनेत्रीहरुको विवाहले चर्चा पाउन थालेको छ । सोनम कपुरले बिहे गरिसकेकी छन् भने प्रियंका चोपडा र दीपिका पादुकोण पनि वैवाहिक बन्धनमा बाधिएका छन् ।
बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टलाई चोरीको आरोप लागेको छ । ‘प्राडा’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको थियो । यो गीत मार्फत आलियाले म्युजिक भिडिओमा डेब्यु गरेकी छिन् । सोही गीतलाई नै चोरीको आरोप लागेको हो । पाकिस्तानी अभिनेत्री मेहविश हयातले आलियाले प्राडा गीत चोरेको आरोप लगाएकी छिन् । उक्त गीतको भिडियोलाई अत्यन्तै मन पराइएको थियो ।